Vichyssoise - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
Cremas43 मिनेट4 व्यक्ति
यो मलाई सबैभन्दा मन पराउने एउटा क्रीम हो। यो मूल कुरा हो परम्परागत खाना त्यो मेरो घरमा कहिल्यै हराउने छैन।
म यसलाई दुई तरिकाले गर्दछु: यो एउटा, जुन क्लासिक लीक र आलु हो, र अर्को जसमा यो प्रतिस्थापन गरिएको छ। स्याउको लागि आलु। म प्राय: तिनीहरूलाई फरक पार्छु किनकि हामी दुबैलाई उनीहरू धेरै मनपर्दछौं र त्यस प्रकारले म अधिक विविध मेनू पाउँछु र म सधै समान चीज बनाउँदिन।
थप रूपमा, vichyssoise लिन सकिन्छ बर्षको कुनै पनि समय किनभने यो तातो र चिसो दुवै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
म यसलाई बनाउन बाफयुक्त दुध प्रयोग गर्दछु हल्का तर यदि तपाई खोज्नु भएको कुरा क्रीमनेस हो भने, यो क्रीमको समान मात्रामा पकाउनको लागि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र यो उत्तम हुनेछ।
बर्षको कुनै पनि समयका लागि उत्तम विधि।
खाना पकाउने समय: 43M
Ek०० ग्राम लीक (केवल सेतो भाग) स्लाइसमा काटियो
टुक्राहरूमा 250 ग्राम आलु
१ चुटकी सेतो मिर्च
जायफलको १ चुटकी
खाना पकाउन २०० ग्राम वाष्पीकरण गरिएको दुध वा क्रीमको २०० ग्राम
गार्निशका लागि चाइभ्स वा अजमोद
हामीले ग्लास र प्रोग्राममा सफा र काटिएको लीक राख्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 4। हामी भित्ताहरू कम गर्दछौं जुन पर्खालमा र शीशाको ढक्काहरूमा रहेको स्पाटुलाको साथमा छ।
हामी तेल र माखन थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र गति 12।
हामी २०० ग्राम पानी र कार्यक्रम थप्छौं १ मिनेट, प्रगतिशील गति 1-5-१० र त्यसैले चुच्चो पूरै कुचियो।
काटिएको आलु, नुन, मरिच र बाँकी g०० ग्राम पानी थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी प्रोग्रामिंग shred १ मिनेट, गति 1।
एक चुटकी जायफल र वाष्पीकरण गरिएको दूध वा क्रीम थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी काटिएको chives वा अजमोद संग सेवा।
थप जानकारी - एप्पल र Leek Vichyssoise
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, १ घण्टा भन्दा कम, सूप र क्रिम, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सूप र क्रिम » Vichyssoise
मनु catman भन्यो
म प्रायः टिप्पणी कहिल्यै छोड्दिन किनकि यो धेरै चीजहरू भर्नु दुखाई हो तर Vichyssoise मैले सत्यको प्रतिरोध गर्न सकेको छैन ... यो अचम्मको कुरा हो! गर्मी मा म यो धेरै गर्छु र यो धेरै स्वादिष्ट छ ...
मनु CatMan लाई जवाफ दिनुहोस्
मनु, यो तपाई जस्तो हुन्छ मलाई, मलाई क्रीम मन पर्छ। यो गर्मीमा भन्दा जाडोमा फरक पर्दैन। चुम्बनहरू।
मैले आज यो बनाएको छु र यो धेरै राम्रो छ यद्यपि मैले थप नुन थप्नु परेको थियो किनकि यो अलि सोसा भएको थियो। विस्तृत रकमको कारण, मेरो सम्पूर्ण गिलास बग्यो। अर्को पटक आधा हाल्छु। हल्का कमजोरीहरूको बाबजुद, क्रीम धेरै राम्रो भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईले गर्न सक्ने अर्को कुरा केहि कम तापक्रम र केही मिनेट कार्यक्रम कम गर्नुहोस्। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
तपाईको सल्लाह को लागी धेरै धन्यबाद। म यो अर्को समयको लागि सम्झनेछु।
मारिया टेक्सन भन्यो
मलाई यो मन पर्थ्यो, म हरेक हप्ता यसलाई बनाउँछु, यो पौष्टिक थाल हो र बनाउन सजिलो छ
मारिया तेजानोलाई जवाफ दिनुहोस्
पल जोस भन्यो
धन्यवाद..! यो अति उत्तम ..
पाब्लो जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
एम। कार्मेन भन्यो
मलाई vichyssoise मन पर्छ! सल्लाहको एक टुक्रा, म ककल्सको क्यान खोल्छु, यसलाई नाली गर्छु र यसलाई भिचिसोइजमा माथि खन्याउछु, यसले यसलाई विशेष "स्वाद" दिन्छ। म तपाईंको स्याउको विचारलाई नोट गर्छु र म यसलाई भोलि प्रयास गर्छु, यो खराब हुनुपर्छ!
दिनदिनै त्यहाँ हुनुभएकोमा धन्यबाद, तपाईसँग मेरो साथ यस साल मेरो क्रिसमसको खाना सफल भएको छ। यसलाई जारी राख्नुहोस्, तपाईं उत्कृष्ट हुनुहुन्छ!
चुम्बनहरू र म तपाईंलाई यो नयाँ रिलीज गरिएको निर्णयमा सर्वश्रेष्ठ दिन चाहन्छु।
एम। कार्मेनलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो एम। कार्मेन, म आशा गर्छु तपाईलाई स्याउ मनपर्‍यो, तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ। म ककल्सको क्यानको नोट लिन्छु र अर्को चोटि प्रयास गर्छु। अभिवादन र धेरै धेरै धन्यबाद तपाईले हामीलाई हेर्नु भयो। हामी हाम्रो रेसिपीहरूसँग जारी राख्दछौं र आशा गर्दछु कि तपाईंले तिनीहरूलाई मनपराउनुहुनेछ।
ओलामा वेनाले यो रंग्यो जस्तो देखिन्छ तर म to०º के.मी. तापक्रम कती छ जान्न चाहन्छु?
नमस्ते jubilo89, मलाई लाग्छ यो डाउनलोड गर्न १ 15 मिनेट लाग्छ। आधारबाट गिलास हटाउनुहोस् र यो चाँडै तल झर्नेछ। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
नमस्ते, पार्टीहरू कस्तो भयो? ………………।
नमस्ते सान्ड्रा, मलाई थाहा छैन तपाईले के भन्न खोज्नु भएको हो।
नमस्कार अहिले म भोलीको लागि क्रीम तयार गर्दैछु, र म तापमान घटाउनको लागि कुर्दै छु, मैले गिलास खोलेको छु र मैले देखें कि आलु फिर्ता छैन, यो सामान्य हो? ।
धन्यबाद म तपाईंलाई हरेक दिन पढ्छु र मलाई तपाईका व्यंजनहरू मनपर्छ। अभिवादन
!!!!! माफी चाहन्छ !!!! म उन्नत हुन्छु। मैले १ मिनेटदेखि १ सम्म विस्तृत पढेको थिइनँ
स्पीड and र अवश्य पनि, उत्कृष्ट !! मैले क्रीमको साथ गरे किनकि मलाई थाहा छैन वाष्पीकरण गरिएको दुध के हो र यसले निश्चित बनाउँदछ कि तपाईंले थोरै कम बोसो बढाउनुभयो, हैन? धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्ते सिल्भिया, म खुशी छु कि तपाईंले यो मन पराउनुभयो। यसलाई वाष्पीकरण गरिएको दूध ("आदर्श" दूध) वा क्रीमसँग बनाउन सकिन्छ, कुनै पनि तरिका यो स्वादिष्ट छ। शुभकामना।
एक शब्दमा: शानदार !!!!
घरमा हामीले यसलाई मन पराउँथ्यौं, यो उत्तम बाहिर आउँदछ।
म यसलाई एक दिनको लागि विशेष स्पर्श दिने सोच्दै छु जुन पाहुनाहरू छन्, माथिबाट काटेको झोलामा लसुन र अजमोदको तेलमा भिजेको, र कचौरामा परोस। तिम्रो के बिचार छ?
पेपी, मलाई लाग्छ यो तपाईंलाई विलासिता दिनेछ। मलाई लाग्छ यो एक उत्तम विचार हो। अभिवादन र म खुशी छु कि तपाईलाई यो मन पर्यो।
व्यंजनहरु महान हो
CATERINA लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई मन परेकोमा म खुशी छु, केटरिना! शुभकामना।
मैले भर्खरै यो अनौंठो नामको साथ यो नुस्खा बनाईएको छु र यो भव्य हो, मैले यसलाई भोलि खाजाको लागि बनाईएको हो, तर मेरो श्रीमान् यसलाई खानामा लिनबाट रोक्न सकेनन्। यो एकदम राम्रो छ। केहि दिन अगाडि मैले यो रेसिपी पृष्ठ फेला पारे र म धेरै खुसी छु। बधाई छ र व्यंजनहरु साझा को लागी धन्यवाद।
धेरै धेरै लौरा धन्यबाद! स्वागत!
हिजो हामीसँग डिनरको लागि क्रीम थियो, मलाई यो साँच्चै मनपर्‍यो। कस्तो दृश्य तपाईसँग छ, हे। तपाईं एक सम्झना छैन 😉
धेरै धेरै धन्यबाद, लिडिया! मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो। शुभकामना।
पिन अगुआ ब्रावो डे लगुना भन्यो
म प्राप्त गर्न चाहान्छु रिसिसेज, यसै बेला म किचेनलाई माया गर्छु, तर म सबै किताबहरू पाउँदिन।
बधाई छ र म तपाईं सबै अद्भुत REC ETAS को साथ साझा गर्न को लागी आशा गर्छु।
पिनो AGUIAR BRAVO DE LAGUNA लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पिनो, "इमेल द्वारा सदस्यता" को लागी साइन अप गर्नुहोस् र प्रत्येक पटक हामीले एक नुस्खा प्रकाशित गर्दा तपाईले यसलाई आफ्नो इमेलमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। जे भए पनि, रेसिपी अनुक्रमणिका जाँच गर्नुहोस् किनकि हामीसँग 350 प्रकाशित थर्मोमिक्स रेसिपीहरू छन्। मलाई आशा छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। शुभकामना।
मैले vicyhyssoise कोसिस गरें र यो राम्रो आएन, मैले तापमानमा drop०º सम्म झर्दै पत्रमा सबै चरणहरू अनुसरण गरें, यद्यपि मलाई यो कारण लाग्दैन, ठीक छ? मसँग लामो पर्खाइको लागि समय थिएन, यो मलाई दोहोर्याईन्छ तर अन्तमा सबै चीज क्रस गर्न, किनभने मैले जुचीनी क्रीमलाई जस्तै गरें, तपाई के भन्नुहुन्छ?
खैर, म धेरै नौसिखिए छु, यो अझै मेरो थर्मोमिक्सको दोस्रो दिन हो
मोन्टसेराटलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मोन्टसेराट, हामीलाई थप डाटा चाहिन्छ, किन यो तपाईंको लागि काम गरेन? उसलाई के भयो? º०º सम्म ड्रप हुनको लागि पर्खनु भनेको अरू कुनै पनि चीज भन्दा सुरक्षाको लागि बढी हो किनकि यस बाहेक, थर्मोमिक्स, ठीक सुरक्षाको लागि, यसले १०० लिन सक्दैन जब यो º०º भन्दा बढि छिटो हुन्छ। म, कि तपाईंले यसलाई पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ जस्तो कि यो आवश्यक पुस्तकमा आउँदछ (पक्कै तिनीहरूले यो तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ तपाईंलाई दिए) तपाईं देख्नुहुनेछ कति राम्रो हुन्छ। यो असफल हुँदैन। सायद त्यहाँ एउटा चरण थियो जुन तपाईंले राम्रो गर्नुभएन ... तपाईंले हामीलाई भन्नुहुनेछ!
म तपाईं ईमेल द्वारा प्रकाशित व्यंजनहरु प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ
नमस्ते मारिना, यदि तपाइँ थर्मोरेसेटस पृष्ठमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने, दायाँमा तपाइँसँग "ई-मेल द्वारा सदस्यता" भन्ने बाकस छ। यदि तपाईंले आफ्नो इमेल ठेगाना त्यहाँ छोड्नुभयो भने तपाईंले हाम्रा सबै रेसिपीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। चासोको लागि धन्यवाद!
म vichyssoise बनाउँदैछु, यो गन्ध आउँछ कि यसले फिड गर्दछ।
अर्को दिन मैले zucchini क्रीम बनाएँ र यो ज्यादै सफल भयो। हेरौं, यो कस्तो छ?
धन्यवाद स्नोगारिया! म यसलाई घरमा धेरै बनाउँछु, मलाई यसको स्वाद मनपर्दछ र यसको केही विविधताहरू छन् ... चाँडै नै म एक आर्टिचोक भिचिसोइसे अपलोड गर्नेछु ... ममीएमएम रमाइलो।
पियर बोनेट भन्यो
नमस्कार, म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु कि म समान स्याउको साथ आलुको सट्टा क्रीम बनाउँछु र यसलाई तयार गर्ने तरिका समान छ?
पियर बोनेटलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पियर बोनेट, म परिवर्तनको सिफारिश गर्दिन किनकि आलुमा स्टार्च छ र मलाई क्रीममा क्रीमनेस र बनावट थप गर्दछ। यसलाई सेबका लागि प्रतिस्थापित गरेर, तपाईं त्यो बन्धन र बनावट पोइन्ट हराउनु हुनेछ। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ एक स्याउको लीकहरूको एक हिस्सा प्रतिस्थापन गर्दछ, यो स्वादिष्ट हुनको लागि निश्चित छ। धन्यवाद !! के यो कुनै प्रकारको असहिष्णुताको कारणले हो?
GoodiiiiisimA। नुस्खा को लागी धेरै धन्यबाद
नमस्ते, मैले भर्खर नुस्खा बनाएँ र लीकले मलाई समात्यो। मैले के गल्ती गरेको छु? मसँग टीएम २१ छ। मैले १२ मिनेटको सट्टा १० मिनेट तालिका राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
म यसलाई पनि राख्छु जब म यसलाई सलादमा राखिएको माथिको भाँडा प्याजको सेवा गर्दछु र यो धेरै राम्रो छ।
Mery लाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो विचार Mery, यसलाई साझा को लागी धन्यवाद
क्रीम वा वाष्पयुक्त दूध प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ?
MAXIMO लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते म्याक्सिमो, तपाईं चाहानुहुन्छ त्यहि मात्रामा दूध थप्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
अति उत्तम !!!!!!!
सम्पूर्ण परिवारले यसलाई प्रेम गरेको छ।
महान मावी, हामी धेरै खुसी छौं! हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद 😉
नमस्कार, मैले यो गरें र यो एकदम राम्रोसँग सकियो, मलाई मात्र अलि मोटो मनपर्ने मात्र यदि मैले केही लीक लगाएँ भने, यो राम्रो हुन्छ? किनकि म बढि आलुहरू थप्न चाहान्दिन
नमस्ते पिलर, यो उत्तम छ यदि तपाईंले श्रोताको मात्रा थोरै कम गर्नुभयो भने, तपाईंले थप सामग्री थप गर्नुपर्दैन us हामीलाई लेख्न धन्यबाद!